नेपाल-खनाल समूह नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा : अध्यक्षको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई ! « Bagmati Online
नेपाल-खनाल समूह नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा : अध्यक्षको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै उक्त समूह नयाँ पार्टी घोषणाबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार उक्त समूहको आन्तरिक छलफलपछि पार्टी अलग भएको घोषणासँगै नयाँ पार्टी गठनबारे समग्र जानकारी गराइने छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा सोमबार पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले नेपाल-खनालसहित ११ जनालाई निष्कासन गरेको छ । पार्टीले पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै नेपाल-खनाल समूह पार्टी गठन गर्नेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार आन्तरिक छलफलपछि पार्टीको नयाँ नाम तय हुनेछ ।
साथै, नयाँ पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी नेपाल दिइने छ भने महासचिवमा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एक जनालाई जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ । हाल नेपाल-खनाल समूहका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडीलगायतका नेताहरु भने अझै पनि एकताको प्रयासमै रहेको छन् । उनीहरुले सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा विपक्ष दलसँगको गठबन्धनमा सामेल भएर हस्ताक्षर गरेका छैनन् । साथै, अब उनीहरुले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेबारेमा अन्योल रहेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले यस्तै कदलम चाल्छन् भन्ने थाहा पाएपछि नेपाल समूहले एक महिनाअघिनै आफूनिकट नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत दर्ता गराएको छ भने खनाल निकट कार्यकर्ताहरुले नेकपा एमाले (क्रान्तिकारी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, आयोगमा नेकपा समाजवादी पार्टी पनि दर्ताको लागि निवेदन परेको पनि बताइएको छ । सोमबार नेपाल–खनालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनसँगै १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए निष्कासन गरिने एमालेले जनाएको छ ।